‘Buufata Baqataa Keessatti Hojjetanii Ofiin Of Bulchuu’ – Baqattoota Oromoo Dadaab Jiraatan
Hagayya 02, 2019
Maatiin Oromoo tokko ka Dadaab jiraatan, jiruun buufata baqataa maal akka fakkaatu fi waan kaan Odu Gabaasaa VOA, Naayroobii Galmoo Daawitiif hiranii jiru
Buufati baqataa Dadaab Keeniyaa Kaaba Bahaa Naayroobiirraa fageenya Kiilo Meetira 475 irratti argama. Buufata baqataa Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbata baqataa UNHCR fi mootummaa keeniyaan bulu kana keessa nama kuma dhibba lamaa oltu jiru; isaan keessaa lammileen Oromoo maatii 150 ol tahu jedha gabaasi UNHCR.
Obbo Ibraahim Mohaammed Hasan dhalataa Oromooti. Isaanis abbaa ijoollee torbaa yoo tahu haadha warraa isaa Nasraa Mohaammednuur waliin Dadaab Ifoo bakka jedhamu jiraatu.
Obbo Ibraahim erga biyya dhalootasaanii Galamsoo bahanii harra ganna 14 guuteera.
Yoo haala jalqaba Dadaab gahu yaadatan Ibrahim jalqaba rifeensa namaa muruun galiin argataniin ijoolleesaanii akka bulfataa turan dubbatu. Sana boodas dukkaana xiqqaa fi mana nyaata itti gurguran banachuun amma jiruu injifachuuf tattaafatu.
Jaarmayaan mootummootaa karaa dhaabbilee gargaarsaa baqattootaaf tumsa gargaasaa dhiyeessus baqattoonni gargaarsi taasifamu baayyee xiqqaadhaa jechuun himatu. Kanaafis baqattoonni jiruu karaa hedduun daangeffame jiruu baqattummaa moo’uuf haga dandeenye carraaqna jedhu.